Election Archives - विवेचना
पत्रकार महासंघमा गठबन्धन विजयी
बिर्तामोड, वैशाख २२ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर एक समितिमा तीन संगठनका साझा उम्मेदवार बहुमतसहित विजयी भएका छन् । शनिबार १४ वटै जिल्लामा सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार अध्यक्षमा विक्रम लुइँटेल निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा सोम सुसेली, स्मिता निरौला, महासचिवमा विवेक गौतम, सचिव बुद्धवीर राई, हरि राई र कोषाध्यक्षमा …
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा पाण्डेले सरोजकुमार बस्नेतलाई १२ मतले पराजित गरे । कुल खसेको ३४३ मतमध्ये पाण्डेले १७७ मत ल्याए भने बस्नेतले १६५ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर महेशबाबु तिमल्सिना प्रथम उपाध्यक्ष भए । …
विमर्श उप्रेती काँकरभिट्टा, चैत ८ । २२ वर्षपछि हुन लागेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आसन्न निर्वाचनमा परिवर्तन प्यानलका उम्मेदवारहरुले आफ्नो पक्षको विजय निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । झापा जिल्ला फुटबल संघले बिहीबार काँकरभिट्टामा आयोजना गरेको उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रममा उक्त प्यानलका उम्मेदवारहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । आगामी …
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघमा रोशन मनोनित
बिर्तामोड, चैत २ । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सघंको कार्यसमिति सदस्यमा युवा व्यवसायी रोशन प्रसाईं मनोनित भएका छन् । वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले प्रसाईंलाई शुक्रबार कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरेका हुन् । सिद्धकाली टे«डर्स एन्ड मल्टिपल सप्लायर्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रहेका प्रसाईंलाई तीन वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारिणी सदस्य पदमा मनोनित गरिएको हो …
दमक जेसीजले पायो पूर्णता
दमक, माघ १२ । दमक जेसीज वर्ष २०१८ ले पूर्णता पाएको छ । पूर्णता पाएसँगै बिहीबार ३७ औँ पदस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत पुस १८ गते सम्पन्न निर्वाचनवाट दमक जेसीजमा खत्रीसहित चार उपाध्यक्षहरु क्रमश: राजकुमार अग्रवाल, रमेश लुईटेल,गंगादेवी ढकाल र विनोद मिश्र ,कार्यकारी उपाध्यक्षद्धयमा कमल कट्वाल , मुकेश …
प्रत्यक्ष जित्ने पाँच महिला उम्मेदवार
रमेश लम्साल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरे पनि अधिकांश महिलाले प्रत्यक्षमा विजय हासिल गरेका छन् । नेपालको संविधानले महिलालाई न्यूनतमरुपमा ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि दलहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएनन् । हालसम्म घोषित परिणामअनुसार कमला रोका, पम्फा भुसाल, दुर्गा …
ओलीको घरमा बम, थापाको गाडीमा क्षति
बिर्तामोड । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा झापा ५ मा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीको दमकस्थित घरअगाडि बम विष्फोट भएको छ । शनिबार बिहान ४ बजेतिर दमक नगरपालिका–५ मा रहेको ओलीको घरको पूर्वी गेटमा अज्ञात समूहले विस्फोट गराएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकाका अनुसार विष्फोटबाट सामान्य क्षति भएको छ । …
निर्वाचन त निकै नजिक आइसक्यो माहोल किन तात्दैन ? यति बेलासम्म त निकै काम कुरो भइसक्नु पर्थ्यो । हैन यो कुन खाले चुनाव आउन आँट्यो हँ ? फलानो होटल फलानो पार्टीले फ्रि गरेक‌ो छ, फलानो भट्टी फलानो पार्टीले नि:शुल्क गरेको छ भनेर कसैले भन्दैनन् त ! होटल र भट्टीहरु खुल्ला …
चुनावको बेला पार्टी परिवर्तन गर्नु कति सान्दर्भिक ? (फेसबुक बहस)
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावी गतिविधि बढेसँगै पार्टी छाड्ने र प्रवेश गर्नेको लहर बढेको छ । आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सभा सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रचारप्रसारमा सबै जुटेका छन् । उम्मेदवारमा धेरै पुराना अनुहार दोहोरिएका छन् । युवा कम छन् । धेरैको नारा छ, हाम्रो होइन राम्रो उम्मेदवार । …
इलाममा वाम गठबन्धनको चुनावी सभा
इलाम । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वाम गठबन्धनले मात्र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र देश विकासका पूर्वाधारलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । चुनाव प्रचार अभियानका क्रममा इलाम क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत माइ नगरस्तरीय संयुक्त वाम गठबन्धन भेलालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवार समेत रहेका खनालले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले …